महिलाहरू कुन बेला कस्ता कुराले खुशी हुन्छन ? कसरी खुशी बनाउने ,पढ्नुस… | Butwal Khabar
भाषा र सांस्कृतिक ‘हेजेमोनी’ को द्वन्द्व
लोक गायक लामिछाने र संगीतकर्मी राजभण्डारी सम्मानित
बिहीवारको दिन यी राशिलाई असाध्यै राम्रो यी राशीलाई ठीकै – जान्नुहोस् तपाईंको आजको भाग्य
अन्तत: छिमेकीले खुलाए टिकाथली भुतकाण्डको रहस्य, रबी लामिछानेलाई दिए यस्तो सुझाव
यदि तपाईले यी ३ लक्षण अनुभव गर्नुभो भने भुलेर पनि बेवास्ता नगर्नुस्, किनकी यसले एकदमै नराम्रो सङ्केत गर्छ
यी १० लक्षण भएका महिलाहरुले बस्नु हुदैन ब्रत, कतै तपाईमा पनि यस्तो लक्षण त छैन नी?
शंख किन बजाईन्छ ? यस्तो छ चमत्कारिक लाभ
महिलाहरू कुन बेला कस्ता कुराले खुशी हुन्छन ? कसरी खुशी बनाउने ,पढ्नुस…
डार्क सर्कलको समस्याबाट छुटकारा दिलाउने यस्ता छन् ८ उपाय , जानी राखौँ
यसरी तेजपत्ताको पातलाई डढाएर प्रयोग गर्दा, यस्ता गम्भिर रोगहरु पनि आश्चर्यजनक रुपमा निको हुने !
Posted by butwalkhabar
in: गृह पृष्ठ
खुसी सबैका लागि पि्रय चीज हो। महिला हुन् वा पुरुष जो कोही खुसीका लागि प्रयासरत देखिन्छन्। जन्मदेखि मृत्युसम्म मानिसले जे-जति गर्छ खुसीका लागि गर्छ। चाहे आफ्ना लागि होस्, आफ्नो परिवार होस् वा आफू वरपरका इष्टमित्र सबैलाई खुसी तुल्याउन ऊ नित्य संघर्षरत देखिन्छ। यद्यपि यहाँ सन्दर्भ महिलाको छ। महिलाहरूमा बढी आवेग, संवेग एवं भावना हुन्छन्। उनीहरू स-साना कुरामा छिट्टै खुसी वा छिट्टै दुःखी भैहाल्छन् भने सबैको खुसी प्राप्त गर्ने माध्यम एकै किसिमको नहुन सक्छ। यसपटकको बहस समग्र महिलाको खुसीका लागि समर्पित छ।
विनीता घिमिरे, नायिका
मेरो विचारमा आत्मसन्तुष्टि नै त्यस्तो एउटा कुरा हो जसले महिलालाई खुसी बनाउँछ। आफूले गरेको परिश्रममा सफलता मिल्दा, सोचेको कुरा पुग्दा पनि त्यत्तिकै खुसी लाग्छ। धेरै अगाडिको कुरा हो मेरो बुबाको अब्रोड भिसा लागेका बेला खुसी मनाउन म लङ ड्राइभ गएकी थिएँ। त्यतिबेला मैले के सोचें कुन्नी बीचैमा रोकिएर भारी वषर्ामा बेस्सरी भिजें। त्यतिबेला मलाई संसारमा मभन्दा खुसी अरू कोही नभएजस्तो लाग्यो। पानीले निथ्रुक्कै हुँदा पनि मलाई कुनै परवाह थिएन। त्यसबाहेक मेरा चलचित्र सफल भए भने मलाई निक्कै खुसी लाग्छ।
इच्छा गुरुङ, सञ्चारकर्मी, इमेज न्युज एफ.एम.
एउटी महिला शिक्षित भइन् भने उनले संसार जित्न सक्छिन्। आफूले खोजेको र चाहेको कुरा पनि यसैमार्फत पूरा हुन्छ। जब चाहना पुरा हुन्छन् तब आत्मसन्तुष्टि मिल्छ। आत्मसन्तुष्टि नै महिलालाई जीवन्त तुल्याउने वा खुसी राख्ने सूत्र हो। अर्को महत्वपूर्ण कुरा महिलाहरू बढी नै भावनामा डुब्ने स्वभावका कारण स-साना कुराले पनि उनीहरूलाई खुसी तुल्याउँछ। जब म खानेकुरा बोकेर लहरै हिँडेका कमिलाको ताँती देख्छु तब म उनीहरूको मेहनत देखेर खुसी हुन्छु। कामबाट थकित भएर जब घर र्फकन्छु रोमान्टिक म्युजिकले मलाई संसारकै सबैभन्दा ठूलो खुसी दिन्छ। परिवार एवं साथीभाइसँग मनका कुरा सेयर गर्दा पनि मन प्रसन्न भएर आउँछ।
बियोन्से, हलिउड गायिका
तपाईं भित्रको आत्मनिर्भरताले तपाईंलाई म को हुँ भन्ने कुरा बोध गराउँछ जुन तपाईंको खुसीको मुहान हो।
नोरटन रोज र फुलब्राइट तथा जावरस्की -बिकी हाउ)
महिलाले आफू हुनुको महत्व बुझ्नु नै खुसी हुने प्रमुख कारण हो।
मीना गुरुङ, सौन्दर्यकर्मी तथा समाजसेवी
महिलामा छिट्टै खुसी हुने विशेष गुण छ। जुन उनीहरूको भावनासँग जोडिएको हुन्छ। महिलाहरू बढी भावनात्मक हुने भएकाले पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ। पुरुषहरू हत्तपत्त खुसी र क्षणभरमै दुःखी पनि हुँदैनन् तर महिलालाई खुसी हुन ठूलो कुरा चाहिँदैन। मेरो सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा आफ्नो कामलाई सबैले स्वीकार गरिदिँदा, अशक्त वा असहायका लागि आफूले केही गर्न पाउँदा अनि आफ्नो परिश्रममा सफलता हासिल गर्दा म अत्यन्त खुसी हुन्छु। सामाजिक कामसँग जोडिएका नाताले समाजका लागि केही गर्न सकेको खण्डमा मेरो खुसीको सीमा रहँदैन।
आफ्नो कामलाई सबैले स्वीकार गरिदिँदा, अशक्त वा असहायका लागि आफूले केही गर्न पाउँदा अनि आफ्नो परिश्रममा सफलता हासिल गर्दा म अत्यन्त खुसी हुन्छु।
उपमा के.सी., फेसन डिजाइनर
हृदयदेखि चित्त बुझेको काम गर्न पाउँदा खुसी लाग्छ।
मेरा अभिभावकले मेरो चाहना बुझेर फेसन डिजाइनिङ पढ्न विदेश पठाउँदा अत्यन्त खुसी भएकी थिएँ। महिलाहरू स्वभावैले स-साना कुरामा पनि धेरै खुसी हुन्छन्। चाहे श्रीमान् वा परिवारले आफूलाई विशेष महत्व दिँदा होस् वा साथीभाइसँगको जमघटमा उनीहरू आफू कसैका लागि केही हुँ भन्ने कुरा देखाउन चाहन्छन्। जसले उनीहरूलाई मनैदेखि खुसी तुल्याउँछ। मैले डिजाइन गरेका पहिरन कसैले वाह भनिदिँदा पनि आफ्नो परिश्रम र मेहनतको कदर भएकोमा खुसी लाग्छ। आफूले गरेका काम सफल हुँदा तथा मेहनतको फल प्राप्त हुँदा म सबैभन्दा बढी खुसी हुन्छु।
सिर्जना खनाल, व्यवसायी तथा अध्यक्ष, सिर्जनशील नेपाल
म सामाजिक काममा बढी रमाउँछु। आफ्नो जीवन त छँदैछ समाजका लागि पनि केही योगदान गर्न पाउँदा खुसी लाग्छ। महिलालाई खुसी हुन ठूलो कुरा चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। स-साना कुराले पनि उनीहरूको जीवनमा खुसी भरिन्छ। आफ्ना सन्तानको सफलता, श्रीमान्लगायत बुबाआमा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उन्नतिले विशेष खुसी दिन्छन्। कसैले मेरो कामको मूल्यांकन तथा मेरो योजनामा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिदिँदा पनि मनैदेखि खुसी अनुभव हुन्छ। श्रीमान्ले मायाले कुनै उपहार दिँदा पनि आफू हुनुको महत्वका कारणले होला भावुक एवं खुसी एकैसाथ हुन्छु।
महिलाहरूलाई कुन कुराले बढी खुसी दिन्छ ?
– ८५ प्रतिशत महिलामा काममा लचकताले तनाव कम गरी जीवनमा खुसी ल्याउँछ।
– ८० प्रतिशत काममा लचिलो तालिका।
– ५८ प्रतिशत काम र जीवनको सन्तुलन।
– ४५ प्रतिशत पैसा।
– ४३ प्रतिशत सम्मान।
– ३० प्रतिशत एड्भान्स जीवनशैली।
– २९ प्रतिशत अरूको तुलनामा फरक देखिँदा।
– १४ प्रतिशत सुरक्षित एवं दिगो जीवन।
स्रोत ःएक्सेन्च्युअर डिफाइनिङ सक्सेस रिसर्च -अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस-२०१३ मा सार्वजनिक)
Previous : डार्क सर्कलको समस्याबाट छुटकारा दिलाउने यस्ता छन् ८ उपाय , जानी राखौँ
Next : शंख किन बजाईन्छ ? यस्तो छ चमत्कारिक लाभ
Copyright © 2015 by Butwalkhabar.com. All right reserved.